कसैले यो खबर प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सुनाइदिनु | Suvadin !
ओलीलाई लाग्छ, ‘मभन्दा ठूलो अरु कोही छ र!’ ओली फेरि ऐना हेर्दा हुन्, र आफूले आफैँलाई प्रश्न गर्दा हुन्, ‘होइन, म भन्दा शक्तिशाली, बहादुर... यो देशमा... कोही...।’ र, फेरि आफूले आफैँलाई उत्तर दिँदा हुन्, ‘देखिस् केटा हो, म ओली हुँ ओली खड्ग ओली।’
Jul 10, 2018 16:46
प्रा.डा. गोविन्द केसी, रामबहादुर थापा र केपी अोली।
काठमाडौं, २६ असार – ‘१५औं पटकको आमरण अनशन। त्यो पनि जुम्लामा, किन होला? यी डाक्टरको अरु काम छैन कि क्या हौ?’ प्रा.डा. गोविन्द केसीको अनशनको विषयमा मंगलबार बिहान काठमाडौंको मैतिदेवीको एउटा चिया पसलमा चिया पिउदै गरेका एक बृद्धले यस्तो प्रतिक्रिया जनाए।
अर्काले एक बृद्धले उनलाई अलि झपारेको स्वरमा भने, ‘कुरा नबुझी बोल्छौ? पैला याँ पढ, गोविन्द केसीले माग गरेका विषय छापिएको छ, जे–पायो त्यही बोल्छौ केपी ओलीजस्तो।’ त्यसपछि त्यहाँ भएका अरु युवा गलल हाँसे। ती अर्का बृद्धले अनुहार रातो पारे।
कम्तिमा ती एक जना बृद्धले चाहिँ गोविन्द केसीका मागका विषयमा जानकारी राखेका थिएछन्। र, उनको जोसिलो गफका बीचमा मैले सोधेँ, ‘हजुरबुवा, गोविन्द केसीले अनशन बसेको १५औं पटक भयो, एक पटक पनि उनका माग के रहेछन् भनेर उनी अनशन बसेको ठाउँमा जानु भएको छ?’
‘म गएको त छैन बाबु, तर यी मान्छे साह्रै त्यागी छन्, मैले १०–११ औं अनशनदेखि चै चासो लिइरहेको छु, सबैका छोराछोरीले डाक्टरी पढ्न पाउने माग राम्रो छ, मजस्ता बुढाबुढी कत्ति छन् गाउँघरमा, कत्ति रोगी छन्, तिनीहरुले उपचार पाउनु परेन?,’ उनले एकै स्वरमा भने, ‘यी मान्छे ठिक छन्, सरकारले नै हो सबैलाई स्वास्थ्य सेवा दिने, नत्र कस्ले दिन्छ भन्नु त? मान्छे त्यसै मर्दैनन्?’
आफ्नो भनाई एकै स्वरमा राखेपछि मलाई प्रतिप्रश्न गरेका यी व्यक्ति ६७ वर्षीय हिराकाजी महर्जन रहेछन्। कम्तिमा हिराकाजीजस्ता पाका मान्छेले चाहिँ प्रा.डा. गोविन्द केसी किन आमरण अनशनमा छन् भन्ने जानकारी राखेका छन्।
तर, सबैभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्ष, अझ भनौं दुइतिहाई मतसहित प्रधानमन्त्री भएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली उर्फ केपी शर्मालाई गोविन्द केसीले उठाएका मागका विषयमा केही जानकारी छैन। वा जानकारी राख्नै चाहँदैनन्। न त गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नै यस विषयमा ज्ञात छ। ओली र थापाहरु त विपुल आनन्दमा रमाइरहेका छन्, सत्ताका मातमा मस्त छन्। तर, देश अस्तव्यस्त छ।
ओली लहडी छन्। अनि चाकडी असाध्यै मन पराउँछन्। ज्यू–ज्यू गर्नेहरुलाई माया गर्छन्, नजिक राख्छन्। ठेकेदार र डनहरुसँग सिरानी जोडेरै सुत्न रुचाउछन्। शुभचिन्तकले जति नै पवित्र मनोभावका साथ आलोचना गरे वा प्रतिक्रिया दिएपनि ओलीलाई त्यो स्वीकार्य हुँदैन। किनभने आखिर उनीमा जागेको ‘म ओली हुँ’ भन्ने दम्भले सकारात्मक सोच्नै दिँदैन।
जीतको मातले उन्मादमा खड्ग ओली
खड्ग ओलीको राजनीति यात्रा सायद वामदेव गौतमले काँधै नथापेका भए यसरी अघि बढ्ने थिएन। तर, खड्ग ओलीले देखाएको ललिपपले वामदेवलाई गलक्कै गलायो। त्यसपछि पछिल्ला दुई महाधिवेशन ओलीका लागि फलिफापसिद्ध भए।
र, माओवादी–एमाले चुनावी गठबन्धन तथा एकतापछि त ओलीलाई लाग्छ, ‘मभन्दा ठूलो अरु कोही छ र!’ ओली फेरि ऐना हेर्दा हुन्, र आफूले आफैँलाई प्रश्न गर्दा हुन्, ‘होइन, म भन्दा शक्तिशाली, बहादुर... यो देशमा... कोही...।’ र, फेरि आफूले आफैँलाई उत्तर दिँदा हुन्, ‘देखिस् केटा हो, म ओली हुँ ओली खड्ग ओली।’
राष्ट्रवादको राग अलापेर नेपाली नागरिकको भोट बटुलेका ओलीको असली अनुहार त अब देख्दैछन् तिनै मतदाताले। आउँलान्, देश बनाउँलान् भनेको आखिर यी पनि ‘कानै चिरिएका’ रहेछन् भन्ने विश्लेषण शुरु भइसकेको छ।
धिक्कार्नु पर्ने स्थिति आउनुअघि नै आफ्ना भुल सुधारे राम्रो। सत्ता सधैँ आफ्नो हातमा हुँदैन। कम्तिमा ३ करोड नेपाली जनताले सम्झिने काम गरेर बिदा भएको राम्रो कामरेड बादल। जनतालार्इ अत्याचार गरे त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने सिकाइरहनु न पर्ला कामरेड।
रामबहादुर थापालाई अनुरोध
नेकपा माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेपछिका शीर्ष कमाण्डरमध्येका एक रामबहादुर थापा अहिले गृहमन्त्री छन्। ओलीकै इशारामा वा लहैलहैमा माइतीघर मण्डलामा निषेधाज्ञा जारी गर्नुअघि एक पटक तत्कालीन राज्यसत्ताले माओवादीमाथि लगाएको अंकुश, गरेको दमन र त्यसबाट आएको परिणाम स्मरण गर्नुपर्थ्यो।
कामरेड बादललाई केही प्रश्न। कामरेड, सत्ताको मातले छोयो? फेरि राजनीति गर्नु छैन? यसैका लागि हो १७ हजार नागरिकको बलिदानी? जनयुद्ध यसैका लागि हो? अलिकति लाजशरम छ कि छैन? नागरिकमाथि दमन गर्दा ज्ञानेन्द्र शाहको हालत के भयो, सम्झना छ कि छैन? कि स्मरणशक्ति गुम्यो?
होला, केसीलाई उखानटुक्का आउँदैन, वाकपटुता नहोला, कपट गर्न नआउँला। तर, उनी स्वार्थी चाहिँ छन्। र, उनको स्वार्थ तीन करोड नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षा हो। माफियाहरुको हातमा रहेको चिकित्साशास्त्र अध्ययनको साँचो फेरि राज्यकै जिम्मा लगाउने प्रयासमा उनी छन्।
र, प्रा.डा. गोविन्द केसी
प्रा.डा. गोविन्द केसी स्वार्थी छन्, ज्यादै स्वार्थी। तीन करोड नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य र लाखौं चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भविष्यसँग केसीले आफ्नो जीवनको एकमात्र स्वार्थ गाँसेका छन्।
होला, केसीलाई उखानटुक्का आउँदैन, वाकपटुता नहोला, कपट गर्न नआउँला। तर, उनी स्वार्थी चाहिँ छन्। र, उनको स्वार्थ तीन करोड नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षा हो।
माफियाहरुको हातमा रहेको चिकित्साशास्त्र अध्ययनको साँचो फेरि राज्यकै जिम्मा लगाउने प्रयासमा उनी छन्। सत्यको बाटो समातेका प्रा.डा. केसीलाई सुकरात, ओशोहरुलाई जस्तै गरी विष पिलाउने कोसिसमा माफियाहरु लागेका छन्।
तर, यो कुरा माफियाको चंगुलमा रहेका ओली र थापाहरुले समयमै बुझ्नु पर्छ। नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षाभन्दा सत्तालाई प्राथमिकता नदिए सबैको भलो हुने थियो।
व्यस्त होलान् प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री त अझै व्यस्त देखिन्छन्। उनीहरुलाई पढ्ने फुर्सद नहोला। तर, प्रा.डा. गोविन्द केसीका मागका बारेमा मैतीदेवीका हिराकाजी महर्जनले बुझेका जत्ति कुरा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सुनाइदिनु होला। तै अलिकति बुझ्छन् कि!